Su'aalo la'iska weeydiinayo Boeing kadib shilkii Itoobiya - BBC News Somali
Image caption Qalbac ka mid ah diyaaraddii burburtay
Shirkadda samaysa diyaaradda Boeing ee dalka Maraykanka ayaa wajahaysa su'aalo badan oo la xiriira heerka badqabka diyaaradda nooceedu yahay 737 kadib shilkii diyaaradeed ee ka dhacay Itoobiya, kaas oo ay ku dhinteen 157-dii qof ee saarnayd.
Ra’isulwasaaraha Itoobiya oo noqday isha koowaad ee warka shilka diyaaradda
Image caption Boeing 737 Max-8 , nooca diyaaradda soo dhacday
Mr Mary Schiavo oo horey uga tirsanaan jirey laanta duulista hawada sare ee Maraykanka ayaa Taleefishinka CNN u sheegay in waxa dhacay ay leeyihiin shaki badan. "Waxa aan halkan ku haynaa diyaarad jadiid ah oo markii labaad dhacday sannad gudihiis, taas waa in ay ka dhawaajisaa dawanada duulista hawada sare, sababtoo ah ma ahan wax iska caadi ah in ay dhacaan" ayuu yiri ninkan.
Baaritaanka lagu hayo shilkii shalay dhacay wuxuu marayaa xilli hore, mana cadda sababta ka dambeysay, iyada oo baarayaasha ay sheegayaan in gef ka dhacay bini'aadamka iyo ciladdo kale aanan meesha laga saari karin.
Image caption Agaasimaha guud ee shirkadda Ethiopian Airlines CEO Tewolde Gebremariam oo tagay goobta uu shilka ka dhacay